देउवाको निष्कर्ष : नेकपाको झगडाले कांग्रेसमा समस्या | Hindu Khabar
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपाका दुवै समूह ठुल्ठूला सभा गर्दै देश दौडाहामा छन् । तर, कांग्रेसले भने संसद् विघटनको विरोधमा सोमबार बल्ल जिल्लास्तरीय शक्ति प्रदर्शन र विरोध सभा गरेको छ ।
तेस्रो चरणको अन्तिम विरोध कार्यक्रममार्फत कांग्रेसले संसद् विघटनको मुद्दामा अदालततिर ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यसपटक पनि नेताहरूले गुटगत रूपमा विभाजित मत व्यक्त गरे । तर, सबैको बोली अदालतको फैसलातर्फ केन्द्रित देखियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपाको झगडाले आफ्नो पार्टीमा समस्या आएको बताए ।
‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजालाई हटाएर प्रचण्डलाई भारतबाट ल्याएर सत्तामा पु¥याए । तर, प्रचण्ड आफैँ राजा हुन अघि सरे, अहिले ओली र प्रचण्ड राजाभन्दा पनि ठूलो राजा हुन खोजे, त्यहीकारण उनीहरूको झगडा भयो,’ देउवाले भने, ‘अब अहिले आपसमा कुर्सीका लागि मारामार भयो, हाम्रोमा त यस्तो झगडा कहिल्यै छैन, बरु उनीहरूको झगडाले हामीलाई समस्या परिराखेको छ, हाम्रै पार्टीमा कोही ओली ठीक भन्छ, कसैले प्रचण्ड ठीक भन्छ । तर, हामी कतैतिर लागेर काम गरेका छैनौँ ।’
देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने भन्दै अदालतले निष्पक्ष निर्णय दिने विश्वास रहेको बताए । ‘अदालतले संसद् फिर्ता गर्छ भने पनि हामीलाई ठीक छ, चुनावतिर जाऔँ भन्यो भने पनि ठीक छ, सर्वोच्च अदालतभन्दा ठूलो अर्को अदालत छैन,’ देउवाले भने, ‘त्योभन्दा ठूलो जनता हो । अदालतले जनतामा जाने बाटो देखाइदियो भने पनि हामी तयार छौँ ।’
रुपन्देही कांग्रेसले भैरहवामा गरेको विरोध सभामा सभापति देउवाले ओली र प्रचण्डलाई राम्रो वकिल राख्न सुझाब दिए । ‘अदालतले जसको ठूलो जुलुस हुन्छ, उसको पक्षमा फैसला गर्ने होइन, जुलुस निकालेर यो गर, त्यो गर भन्नु गलत छ,’ देउवाले भने, ‘प्रचण्डको ठूलो जुलुस हुन्छ कि ओलीको ठूलो जुलुस हुन्छ ? अदालतले त्यो हेर्दैन । त्यस्तो भए त अदालत नै किन चाहियो । जसको जुलुस ठूलो हुन्छ, उसले भनेको माने भइगो !’
देउवाले पार्टीमा आफूले अदालतको निर्णय पर्खियौँ भनेर प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसभित्रै कसैले नमानेको गुनासो पोखे । ‘अदालतको निर्णय पर्खियौँ, निर्णय हुन दियौँ, त्यसपछिचाहिँ हामीले निर्णय गरौँला भन्दा हाम्रै पार्टीमा कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका मान्ने भए त अदालतलाई पर्खिनुप¥यो । अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । अहिले नै हामीले यो वा ऊ भन्ने कुरा छैन ।’
देउवाले नेकपाको चुनाव चिह्नको झगडाको समाधानका लागि समेत सुझाब दिए । ‘चुनाव चिह्नमा झगडा छ भने आयोगले किन दिँदैन ? चुनाव चिह्न कसलाई दिने भनेर निर्णय गराउन नसक्ने आयोग कस्तो ?’ देउवाले भने, ‘सूर्य त एउटै छ, दुईटालाई कसरी दिन्छ ? एउटै सूर्य भाग लगाउन मिल्छ र ? आयोगले एउटालाई त्यो चुनाव चिह्न दिनुप¥यो, त्यसमा अदालतलाई पर्खिनुपर्ने कुरै छैन ।’ देउवाले कम्युनिस्टलाई कानुनले झगडा नगराएको बताए । ‘उनीहरू न त आफ्नो झगडा मिलाउन सक्छन्, न फुट्छन्, यो उनीहरूको तमासा मात्रै हो, कानुनले झगडा गराएको पनि होइन,’ उनले भने, ‘हामीलाई उनीहरूको तमासा हेर्ने रहर छैन ।’
देउवाले निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारीका लागि अदालतको फैसला कुर्न नपर्ने बताए । ‘संसद्को विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ, कमसेकम जेठको अन्तिमसम्म चुनाव गराउनैपर्छ । चुनाव गराउने हो भने प्रक्रिया सुरु गर्नुप¥यो । अहिलेसम्म चुनावको कार्यक्रम किन बाहिर ननिकालेको ?’ देउवाले भने ।
उनले निर्वाचन आयोग पनि संविधानभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताए । ‘संविधानको कुरा आयोगले मतलब नै गरेको छैन, म यहीँबाट आयोगलाई भन्न चाहन्छु, संसद् विघटन गरेको ६ महिनाभित्र चुनाव गराइसक्नुपर्छ । ओलीले वैशाखमै चुनाव गराउँछु भनेका छन् । यही कुरा निर्वाचन आयोगले किन नभनेको ?’ देउवाले आयोगलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नुपर्ने वेला भएको छ ।’ नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको छ ।